सचिनको विवादमा आँखाभरि आँसु बनाउदै बोले बिमल अधिकारी ! बाच्नै नै गार्हो भयो भन्दै भक्कानिए – Koshi Sandesh
सचिनको विवादमा आँखाभरि आँसु बनाउदै बोले बिमल अधिकारी ! बाच्नै नै गार्हो भयो भन्दै भक्कानिए
Koshi Sandesh२१ माघ २०७७, बुधबार २०:२८
सामाजिक संजालमा बिभिन्न टिकाटिप्पणी आएपछि उनले एक अन्तर्वार्ता दिदै गर्दा भाबुक बनेका छन्। बिमल भन्छन मैले मान्छे मारेको त् होइन किन यति धेरै म संग दुश्मनी। मैले त् सचिन बाबुको लागि राम्रै भनेको थिए। मलाई धेरै गाली गरियो साथै मेरो आमा बुवालाई पनि तथानाम गालि गरियो जति गालि गर्नु छ मलाई गर्नुहोस् मेरो आम बुवालाई गालि न गर्नु होस्। मेरो आमा बुवाले के बिगर्दिनु भाको छ र भन्दै उनि भाबुक बनेका छन्। हेर्नुस भिडियो सहित